Ọ dị mma! Mfe, ngwa ngwa na uzo uzo | ECommerce ozi ọma
ECommerce ozi ọma | | Eziokwu na akụkọ
Chọpụta na n'oge ụfọdụ mmefu a na-atụghị anya ya na-ebilite dị ka ịrụzi akụrụngwa ma ọ bụ ihe nrụzi n'ụlọ, ịzụta kọmputa ma ọ bụ friji ọhụrụ maka mmejọ a na-apụghị imeri emeri. Anyị enweghị ike ịnwe ụdị mmefu a oge niile, ọ dabara nke ọma, anyị nwere nhọrọ dịka ¡QuéBueno!
Ekele dịrị ¡QuéBueno! anyị ga-enwe ike ị nweta ego n'ụzọ dị mfe, ngwa ngwa na uzo. Ọ bụ ihe akwụmụgwọ n'ịntanetị ngwa ngwa nke belata ego na obere oge, nke ị ga-enwe ike ihu ụdị mmefu a na-atụghị anya ya.
Otu uru dị ukwuu ¡QuéBueno! na-enye anyị bụ na ụzọ anyị ga - esi nweta kredit gị dị mfe. O nwere ike ịbụ na anyị ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ na-atụghị anya ya, ma ọ bụ njem ma ọ bụ ụgwọ ahụike dịka eze. N'agbanyeghị ihe kpatara ya, Anyị ekwesịghị inye nkọwa banyere mmalite nke kredit n'ịntanetị.
1 Otu esi enweta ego ngwa ngwa na loan QuéBueno!
2 Chọrọ iji nweta ego na ¡QuéBueno!
Otu esi enweta ego ngwa ngwa na loan QuéBueno!
Naanị anyị ga-aga webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. N'ebe ahụ anyị na-achọta ozi niile gbasara mgbazinye ngwa ngwa, ego enyere na ọnọdụ. Ya mere, tupu ị rịọ otu, anyị nwere ozi niile ma nwee ike ikpebi ma ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Nghọta dị mkpa ¡QuéBueno!
Anyị kwesịrị gosi ego ole anyi choro inweta na oge nke anyi ga eweghachi ya. Ọ bụ anyị na-ekpebi nke a, yabụ anyị nwere ike ịhọrọ ihe ga-akacha baara anyị uru ma dabara adaba dabere na ọnọdụ ahụ. Ọzọ, anyị ga-ejupụta obere mpempe akwụkwọ yana data nkeonwe dị mkpa, nke na-ewe obere oge iji wuchaa ya.
Mgbe anyị mechara nke a, na oge nke ihe dika 10 nkeji anyi gha enwe azịza. Ọ bụrụ na azịza a dị mma, anyị ga-enweta ego a anyị rịọrọ ¡QuéBueno ozugbo! na nọmba akaụntụ anyị. Ngwa ngwa na mfe.
Chọrọ iji nweta ego na ¡QuéBueno!
Onye ọ bụla nke iwu kwadoro nwere ike ịrịọ mgbazinye ego na ¡QuéBueno! N'ezie, ihe ụlọ ọrụ guzobere iji nwee ike ime nke a bụ ihe ndị a:
Bụrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 18
Bụrụ onye nwe ụlọ akụ
Nwee ekwentị mkpanaaka
Nwere kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ metụtara na akaụntụ akụ ahụ kwuru
Ozugbo anyị na-erubere ha isi, anyị ga-enwe ike ịrịọ otuto a, na-ewere usoro ndị anyị kwuru na mbụ. Ọ dị mma! ga-ahụ maka ịtụle ma ọ ga-ekwe omume ibinye ego ahụ achọrọ. Maka nke a, a ga-atụle akụkụ ụfọdụ, nke dị mma ịmara.
A ga-enyocha akụkọ ihe mere eme nke ndabara na akụkọ kredit iji hụ ma anyị etinyela akwụkwọ maka ọtụtụ kredit n'oge gara aga ma ọ bụ taa. Ọzọkwa ikike anyị ịkwụ ụgwọ ego a. Ọ bụ usoro a ga - agarịrị, mana dịka usoro izugbe ihe niile ga - adị n'usoro, naanị n'ime nkeji 10 anyị ga - enweta otuto anyị.
Dị ka anyị nwere ike ịhụ, lee ihe dị mma! abịawo ịnye ihe dị iche na ahịa ego. Dị mfe, na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa (na naanị 10 nkeji anyị nwere ike ịnwe ya), na-emegharị ọnọdụ anyị ma bụrụ nke nghọta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Ọ dị mma! Mfe, ngwa ngwa na uzo uzo